Izindaba - Isingeniso Kwamanye Ama-Plastics Wokudla
Isingeniso Kwamanye Ama-Plastics Wokudla
Ukuhlaziywa kolwazi lwezeMpilo lwe-PP, i-PC, i-PS, i-Tritan Plastic Water Bottle
Amabhodlela amanzi epulasitiki angabonakala yonke indawo empilweni. Amabhodlela amanzi epulasitiki amelana nokuwa, kulula ukuwaphatha, futhi anesitayela ngokubukeka, abantu abaningi bavame ukukhetha amabhodlela amanzi epulasitiki lapho bethenga amabhodlela amanzi. Eqinisweni, abantu abaningi abazi izinto zamabhodlela amanzi epulasitiki, futhi imvamisa abanaki ukuhlukaniswa kanye nokuphepha kwezinto zamabhodlela amanzi, futhi bavame ukungakunaki ukuphepha kwempahla yamabhodlela amanzi.
Izinto ezijwayelekile zamabhodlela amanzi epulasitiki yiTritan, i-PP plastic, i-PC plastic, i-PS plastic. I-PC yi-polycarbonate, i-PP yi-polypropylene, i-PS yi-polystyrene, kanti iTritan isizukulwane esisha se-copolyester.
I-PP ingenye yezinto zepulasitiki eziphephe kakhulu okwamanje. Ingamelana namazinga okushisa aphezulu futhi ingafudunyezwa kuhhavini we-microwave. Inokumelana nokushisa okuhle kakhulu, kepha ayinamandla, kulula ukuyephula, futhi inokubonakala okusobala.
Impahla ye-PC iqukethe i-bisphenol A, ezokhishwa lapho ivezwa ukushisa. Ukutholwa kwesikhathi eside kwamanani wokulandela ngomkhondo we-bisphenol A kuzodala ingozi empilweni yomuntu. Amanye amazwe nezifunda zikhawulele noma zavimbela i-PC.
Impahla ye-PS yinto ebonakalayo ecwebe kakhulu kanye ne-gloss surface ephezulu. Kulula ukuyiphrinta, futhi ingafakwa umbala ngokukhululeka, ayinaphunga, ayinambitheki, ayinabuthi, futhi ayibangeli ukukhula kwefungus. Ngakho-ke, sekuyinto yezinto ezithandwa kakhulu zepulasitiki.
Abakhiqizi babhekene nengcindezi yezempilo nokuvikelwa kwemvelo futhi bafuna izinto ezingashintsha i-PC.
Kulesi sizinda semakethe, i-Eastman yase-United States isungule isizukulwane esisha se-copolyester Tritan. Ziyini izinzuzo zayo?
1. Ukungena okuhle, ukudluliswa kokukhanya> 90%, i-haze <1%, nge-luster efana ne-crystal, ngakho-ke ibhodlela le-Tritan lisobala futhi licacile njengeglasi.
2. Ngokuya kokumelana namakhemikhali, izinto zeTritan zithatha inzuzo ephelele, ngakho-ke amabhodlela eTritan angahlanzwa futhi abulawe amagciwane ngama-detergent ahlukahlukene, futhi awasabi ukugqwala.
3. Ayinazo izinto eziyingozi futhi ihlangabezana nezidingo zokuvikelwa kwemvelo kanye nempilo; ukuqina okuhle, amandla amakhulu omthelela; ukumelana nokushisa okuphezulu phakathi kuka-94 ℃ -109 ℃.